Eyona Micronized Palmitoylethanolamide powder Manufacturer
ICofttek yeyona mveliso ilungileyo yePalmitoylethanolamide (PEA) e-China. Umzi-mveliso wethu unenkqubo epheleleyo yolawulo lwemveliso (i-ISO9001 kunye ne-ISO14001), kunye namandla emveliso yenyanga angama-3200kg.
Palmitoylethanolamide powder ividiyo
I-Palmitoylethanolamide (PEA) powder Suqobo
igama: I-Palmitoylethanolamide (PEA)
Ukungcola I-98% ye-MicA eneMicrosoft PE 98% yomgubo
Ifomula yeMolekyuli: C18H37NO2
Ubunzima Ezinto: 299.49 g / mol
Melt Point: 93 ku-98 ° C
Igama leKhemikhali: IHydroxyethylpalmitamide Palmidrol N-Palmitoylethanolamine Palmitylethanolamide
Ubomi obulicla: iiyure 8
isicelo: I-Palmitoylethanolamide (i-PEA) yintsapho ye-endocannabinoid, iqela lama-acid amide. I-PEA iye yaqinisekiswa ukuba inomsebenzi we-analgesic kunye ne-anti-immune kwaye isetyenziswe kwizifundo ezininzi ezilawulwayo ezigxile kulawulo lweentlungu ezingapheliyo phakathi kwabaguli abadala abaneemeko ezahlukeneyo eziphantsi kwezonyango.
I-Palmitoylethanolamide (544-31-0) Spectrum yeNMR
I-Palmitoylethanolamide yi-endogenic fatty acid amide ewela phantsi kweklasi ye-Nuclear Factor Agonists. Ngokwendalo kwenzeka ekutyeni okunje ngeembotyi zesoya, amandongomane e-lecithin kunye nomzimba womntu.
IPalmitoylethanolamide yafunyanwa okokuqala kwii-1940s zakuqala. Izazinzulu ziqale zafumanisa ukuba ukusetyenziswa kwe-olk ye-olk eyingcwecwe kukhuthaza impendulo yomzimba enempilo ebantwaneni kunye nokunciphisa umngcipheko wokuba ne-rheumatic fever. Uphando olongezelelweyo luqukumbele ukuba izikhupha zamaqanda ziqulathe ikhompawundi okt, i-PEA. I-PEA ifunyenwe kukutya okupheleleyo njengamandongomane kunye neembotyi zesoya, ezinceda ukubonelela ngezifo ezomeleleyo kunye nezibonelelo zezempilo.
Ngaphandle kokufunyanwa kukutya okuthile, i-PEA ikwenzeka emzimbeni wethu ngokwendalo. Imichiza iveliswa emzimbeni wethu ziiseli zethu ezininzi njengenxalenye yempendulo yomzimba yokuzikhusela. I-PEA yenziwe ngokukodwa ngumzimba wethu ekuphenduleni ukudumba. Kuyaziwa ukulawula iintlungu zethu emzimbeni ngokukhusela amajoni ethu omzimba ekugqithiseni kwaye ikhuthaza ukuphendula komzimba kunye nokuvuvukala emzimbeni.
I-Palmitoylethanolamide powder isetyenziswa kakhulu njengeyeza lentlungu, i-fibromyalgia, i-neuropathic pain, i-multiple sclerosis, i-carpal tunnel syndrome, kunye nezinye iimeko ezininzi.
I-Palmitoylethanolamide kunye ne-Cannabinoid Family
I-Palmitoylethanolamide ayiveli kwi-cannabis kodwa inokuthathwa njengenxalenye yosapho lwe-cannabinoid. I-PEA isebenza ngendlela efanayo ne-CBD (i-cannabidiol), yenye yezona zinto ziphambili kwi-cannabis kodwa ayinaziphumo zengqondo. Iimveliso ze-CBD zithandwa kakhulu kwezi ntsuku kwaye ziyafumaneka phantse kuyo yonke into ukusuka kwioyile ukuya kwiikhrim, kunye nemveliso yokutya. Iimveliso ze-CBD zikwasetyenziselwa uninzi lwezibonelelo ezinokubakho kwezempilo, kubandakanya impilo yengqondo, imithambo-luvo kunye nempilo edibeneyo.
I-PEA ikwayi-cannabinoid, kodwa iyahlaziywa njenge isipheloi-cannabinoid njengoko yenziwe ngaphakathi komzimba. Nangona kunjalo, yahlukile kwi-cannabidiol kunye ne-tetrahydrocannabinol njengoko umzimba ungenzi ngokwendalo ezi khemikhali.
I-Palmitoylethanolamide ibangela ukutshiswa kwamafutha, ukonyusa amandla, kunye ne-alpha ye-PPAR echasene nokuvuvukala. Xa ezi proteni zibalulekileyo zisebenza, i-PEA iyeka isenzo semfuza esikwaziyo ukukhuthaza ukudumba kwaye sinciphise ukuveliswa kwezinto ezininzi ezivuthayo. I-PEA iyanciphisa nomsebenzi we-gene FAAH eyaphula indalo i-cannabinoid anandamide kwaye inyuse amanqanaba e-anandamide emzimbeni. I-Anandamide inoxanduva lokunciphisa iintlungu, ukuthoba ingqondo, kunye nokukhuthaza ukuphumla emzimbeni wakho.
I-PEA yaziwa nangokubopha iiseli zomzimba kunye nokunciphisa iintlungu kunye nokudumba. Iqulethe i-palmitic acid kulwakhiwo lwayo, olunceda umzimba ukuba wenze iPalmitoylethanolamide emzimbeni.
Ngokwezinye izazinzulu, ukwandisa nje ukutya kwakho i-palmitic acid akuyi kuchaphazela ukuveliswa kwe-PEA. Kungenxa yokuba umzimba wakho uya kusebenzisa i-PEA emzimbeni wakho kuphela xa kufuneka uphilise ukuvuvukala okanye iintlungu zakho. Oku kubangela amanqanaba e-PEA emzimbeni oqhele ukwahluka imini yonke.
Eyona ndlela yokufumana izibonelelo ze-PEA kukutya ukutya okutyebileyo kwe-PEA okanye izongezo ezisemgangathweni.
Izibonelelo zePalmitoylethanolamide powder kunye nokusetyenziswa
I-PEA ibonakalisiwe ukuba ineempawu zokuthomalalisa iintlungu kunye nokuchasana nokuvuvukala kwaye isetyenziselwe ulawulo lweentlungu ezingapheliyo kubantu abadala abaneemeko ezininzi zeklinikhi. Umzekelo, unokubonelela ngesiphumo esiluncedo njengonyango lokunyanga iintlungu ezisezantsi kwizigulana ezindala okanye inokusetyenziswa yodwa kulawulo lweentlungu ezingapheliyo kwizigulana ezigulel 'endaweni ye-analgesics yemveli enomngcipheko omkhulu weziphumo ezibi.
Iziphumo ezithembisayo zibonakalisiwe kunyango lwee-radiculopathies ezingezizo ezenziwa nge-Ultra-micronised formulation ye-PEA kunye nonyango oludibeneyo kunye ne-alpha-lipoic acid yokunciphisa isifo esinganyangekiyo se-prostatitis / esinganyangekiyo.
Apha ngezantsi kukho izibonelelo ezilungileyo ze-PEA:
· Uncedo Lwezinhlungu
Kukho ubungqina obuqinisekisa amandla e-PEA okunciphisa iintlungu ezinzima. I-PEA iphandwe ngaphezulu kwamawaka amathandathu abantu kunye novavanyo lweklinikhi ezingama-6 ukusukela kwiminyaka ye-30. Nangona kunjalo, isifundo sihlala sisilele ukwahlula phakathi kwentlungu ye-neuropathic kunye ne-non-neuropathic. Inkqubo ye- izibonelelo ze IPalmitoylethanolamide Iintlungu ze-neuropathic azicacanga ncam ngenxa yolwazi olwaneleyo ukuza kuthi ga ngoku.
Olunye uthintelo yayikukuba uninzi lwezi zifundo lwaluswele ulawulo lwe-placebo kwaye uphando olukumgangatho ophezulu luyafuneka ukuthatha isigqibo sokusebenza kwe-PEA ekunciphiseni iintlobo ezahlukeneyo zentlungu.
Kuvavanyo lwezifundo zabantu ezili-12, izongezo ze-PEA zibonise ukusebenza ngempumelelo ekunciphiseni i-potency yeentlungu ezingapheliyo kunye ne-neuropathic ngaphandle kweziphumo ebezingalindelekanga. Abo bantu bali-12 babenikwa izongezo ze-PEA ngeedosi phakathi kwe-200 ukuya kwi-1200 mg / ngosuku ngaphezulu kweeveki ezi-3 ukuya kwezi-8. Isongezelelo sithathe malunga neeveki ezimbini ukufezekisa imeko yokuphelisa iintlungu. Ukuyithatha nangaliphi na ixesha elide ukondla iziphumo zayo ngaphandle kokubangela iziphumo ezibi.
Olunye uphononongo olwenziwe nge-300 okanye i-600 mg / usuku lwe-PEA lubonise ukuncipha okunamandla kwintlungu ye-sciatica kuvavanyo olubalulekileyo lwabantu abangaphezu kwama-600. I-PEA inciphise iintlungu ngaphezulu kwe-50% kwiiveki nje ezi-3, ezingafezekiswanga uninzi lweentlungu zentlungu.
· Impilo yobuchopho kunye nokuzalwa kwakhona
I-PEA iye yaziwa njengeluncedo kwizifo ezingenayo i-neurodeergenerative kunye ne-stroke. Isongezelelo sithathwa njengephucula ukusebenza kwengqondo ngokunceda iiseli zobuchopho ukuba zisinde kunye nokunciphisa ukudumba.
Kuphononongo lwezigulana ezingama-250 zestroke, ukwenziwa kwe-PEA kunye ne-luteolin kubonise iimpawu zokuphucula kwakhona. Ikwabhengezwa ukuba ineziphumo ezilungileyo kwimpilo yengqondo elungileyo, izakhono zokuqonda, kunye nokusebenza kwengqondo kwemihla ngemihla. Iziphumo zabonakala emva kweentsuku ezingama-30 zokuncedisa kwaye xa emva kweenyanga ezimbini zokuncedisa, kwaphuculwa ngakumbi.
Zombini zine-luteolin kwaye zodwa, i-PEA yabonwa ukuthintela isifo sika-Parkinson kwiimpuku xa zisetyenziswa ne-luteolin. Iyanciphisa ukonakala kwengqondo ngokukhusela ii-dopamine neurons. Nangona kunjalo, izifundo eziqhelekileyo zeklinikhi ziyafuneka ukuqinisekisa ezi ziphumo.
Olunye uphononongo lubonise ukuba i-PEA ene-luteolin incede ekuphuculeni izinto ze-neurotrophic ezinje nge-BDNF kunye ne-NGF ezineeprotein ezincinci ezinamandla eziluncedo ekwenzeni iiseli zengqondo ezintsha. Yonyusa amandla engqondo okuhlaziya iiseli ezintsha kunye nezicubu emva komonakalo oxinzelelekileyo kwintambo yomqolo okanye kwingqondo. Xa i-PEA kunye ne-luteolin yayisetyenziswa kwiigundane yonyusa ukuphiliswa kwemithambo-luvo kwiimpuku ezinokulimala kwethambo lomqolo.
Ngenxa yokuvela kwendalo kwee-cannabinoids kwi-PEA, iziphumo zibonise ukuphuculwa kokuziphatha kwabaguli, imeko yeemvakalelo. Kubonakalise ukwehla komngcipheko wokubanjwa kweempuku. Nangona kunjalo, iziphumo zalo ekubanjweni azikaphandwa ebantwini kwaye izifundo ezizezinye ziyafuneka ukuqinisekisa oku.
· Iziphumo entliziyweni
Ukuhlaselwa yintliziyo kwenzeka ngenxa yokuvaleka kwemithambo yegazi eya ngqo entliziyweni. I-PEA yaziwa ngokufumana kwakhona umonakalo wezicubu zentliziyo kunye nokunyusa ukuhamba kwegazi kuye entliziyweni okunceda ukunciphisa iimeko zokuhlaselwa sisifo sentliziyo. Uphononongo kwiimpuku lukwabonisa ukwehla kwamanqanaba e-cytokine aqinisekileyo kwiintliziyo.
Ukusetyenziswa kwe-PEA kukwehlisile nenqanaba loxinzelelo lwegazi kwiigundane kunye nokuthintela ukonakala kwezintso ngokunciphisa izinto ezivuthayo. Ngokunciphisa imithambo yegazi, i-PEA yayisebenza ukubhloka ii-enzymes kunye nee-receptors ezonyusa uxinzelelo lwegazi.
· Iimpawu zoxinzelelo
Kuphononongo lwakutsha nje, abantu abangama-58 abanengxaki yokudakumba baphathwa nge-PEA. Imithamo ye-1.2 gm ngosuku yanikwa abaguli ngaphezulu kweeveki ezi-6. Oku kukhokelele kuphuculo olukhawulezileyo lweemood kunye neempawu zizonke. I-PEA xa yongezwa kunyango lwe-antidepressant okt, i-citalopram, yehlisa iimpawu zoxinzelelo ngomgangatho we-50%.
· Iimpawu zokubanda okuqhelekileyo
Olunye uphononongo lubonise i-PEA njengesixhobo esisebenzayo sokulwa intsholongwane yomkhuhlane ebangela ukubanda okuqhelekileyo. Kunye kuvavanyo lwakwangoko lwabantu abangaphezulu kwamawaka ama-4, i-PEA yakwazi ukubonakalisa impembelelo entle ekukhuseleni kwaye yanceda ukunciphisa iimpawu ezinje ngomkhuhlane kwizigulana.
Kwesinye isifundo, amajoni amancinci angama-900 anikwa malunga ne-1,200 mg ye-PEA eyanciphisa ixesha lokubanda kunye neempawu eziphilileyo ezifana nomqala, impumlo, umkhuhlane kunye neentloko.
· Ukuqunjelwa sisisu
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho i-PEA isetyenziswe ngempumelelo ekuvuseleleni iimpawu zesifo sokukrala kwamathumbu (IBS) kwizilwanyana. I-PEA isongezo xa kuvavanywa iimpuku ezinesifo esinganyangekiyo esiswini, incedise ukulungelelanisa intshukumo kunye nokuthintela ngokufanelekileyo umonakalo kumngxunya wamathumbu.
Ukonakala kwamathumbu okanye ukudumba kubangelwa sisilonda sikabhobhosi esingakhokelela kumngcipheko womhlaza. Ukusetyenziswa kwe-PEA kumise izicubu eziqhelekileyo zesisu ekukhuthazeni ukwanda komhlaza kwiimpuku. I-PEA inciphisa ii-cytokines ezivuthayo kunye nokukhula kwee-neutrophils kunye neeseli zomzimba ezomeleza iimpawu zomonakalo wamathumbu.
Imithombo yokutya yePalmitoylethanolamide
Nangona i-PEA yi-acid ene-asidi egcweleyo, kubandakanya amafutha amaninzi kwi-diet yakho iya kwenza ingozi ngaphezu kokulungileyo. Ukutya ukutya okuphezulu kumafutha agcweleyo akuyi kuyonyusa imveliso ye-PEA yomzimba wakho endaweni yoko kuya kukonyusa umngcipheko wokukhula kwezifo ezingapheliyo kunye nokuvuvukala.
Ukutya okufana neemveliso zesoya, i-lecithin yesoya, amandongomane, kunye ne-alfalfa yenye yemithombo elungileyo ye-PEA. Abantu abane-allergies ye-nut kufuneka batsiba amandongomane kwaye batye okunye ukutya. I-yolk yeqanda ngomnye umthombo olungileyo kwaye inokudliwa ngabantu abangenalo uvakalelo kumaqanda. Abathengi banokuthi baqwalasele ukuthatha izongezo ze-PEA njengoko zikhuselekileyo kwaye zikhetha ngokufanelekileyo.
I-PEA yongeza idosi kunye nokhuseleko
Ngokwezifundo zeklinikhi, ubuncinci be-600 mg / ngosuku kunokufuneka ukuba kunciphise iintlungu, kwaye iidosi ze-1.2 g / ngosuku zinokusetyenziselwa ukunyanga iintlungu zeswekile.
Kwizigulana ezinesifo seswekile ezinengxaki yamehlo, iidosi ukuya kuthi ga kwi-1.8 g / ngemini bezisebenza ukunciphisa umonakalo kwiimbilini zamehlo.
Ukunyanga kokubanda okuqhelekileyo, i-1.2 g / usuku lwe-PEA yayingumgangatho oqhelekileyo.
Thetha nogqirha wakho ngaphambi kokuba uthathe izongezo ze-PEA njengoko i-PEA ingavunyelwanga yi-FDA ukuba ithathe amanani amakhulu.
Ukusetyenziswa kwePalmitoylethanolamide powder okanye izongezo kwiidosi ezincinci, ezilinganiselweyo zithathwa njengezikhuselekileyo. Nangona kunjalo, izifundo zeklinikhi eziphambili ziyafuneka kwiidosi eziphezulu. Ukuxhaswa kwexesha elide le-PEA kwaziwa ngokuba kukhuselekile ngokwezifundo ezincinci.
Abanye abavelisi abavela kumzi-mveliso we-PEA bacebisa ukwahlula idosi iyonke kubini kwaye uyisebenzise emini. Ngamanye amaxesha, i-PEA enemicronised, ethi ngamagama alula ilungile i-palmitoylethanolamide powder, iyaziwa ukuba ibhetele emzimbeni kwaye izazinzulu zicinga ukuba ifom ye powder ingaphezulu kwezinye iifom.
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-PEA
Ukusetyenziswa komlomo kwe-palmitoylethanolamide ngokubanzi kuthathwa njengokukhuselekileyo kubantu abadala xa besetyenziselwa ukuya kuthi ga kwiinyanga ezintathu. Ukuza kuthi ga ngoku, akukho ngxaki zinzima okanye ukuhlangana kweziyobisi neziyobisi sele kuchongiwe. Nangona kunjalo, akukho lwazi lwaneleyo lokutsho ukuba iyeza linokukhuseleka xa lisetyenziswe ngaphezulu kweenyanga ezintathu. Iziphumo ebezingalindelekanga zinokubandakanya isisu esibuhlungu, esinqabe kunene.
Ukuze icace gca, i-PEA ayikhange ibangele naziphi na iingxaki ezinzulu nakweyiphi na kwezi zifundo zingasentla kodwa isenazo izifundo zokhuselo ezifanelekileyo. Kwakhona, akukho bungqina obaneleyo bokubona ubungakanani bokusebenza kwe-PEA kwizigulana ezinolu hlobo lwentlungu.
I-PEA ngokubanzi ithathwa njengekhuselekileyo ekusebenziseni abantu abadala kunye nezifundo ezimbalwa zikwabonakalise kancinci ukuba akukho bungozi ebantwaneni. Kodwa izifundo ezikhulu ziya kufuna ukuqinisekisa ukhuseleko lwe-PEA ebantwaneni. Ngenxa yokunqongophala kwedatha eyaneleyo yeklinikhi, abafazi abakhulelweyo nabancancisayo bacetyiswa ukuba balandele isilumkiso kwaye babonane nogqirha ngaphambi kokuba bathathe naziphi na izongezo ze-PEA.
I-PEA inciphise iziphumo ezibi kunye neentlungu ngelixa ziphucula umgangatho wobomi. Izifundo zayo zixhasa ukhuseleko kunye nokusebenza kakuhle kwe-asidi enamafutha kwaye ziyacetyiswa zikhuselekile kusetyenziso lweklinikhi lwe-PEA. Isongezelelo sisebenza ngokukuko kwi-syndromes yoxinzelelo kubandakanya i-carpal tunnel syndrome kunye nentlungu ye-sciatic. Ukongezwa kwe-PEA kukwalula ukuthatha kwaye kunokulawulwa ngomlomo.
Khumbula ukudibana nogqirha ngaphambi kokuba uthathe naziphi na izongezo ze-PEA njengeedosi eziphezulu ze-PEA ezinokubangela iingxaki ezithile. Nangona iingxaki zinobulali kwaye azikho nzulu, i-PEA mayingasetyenziselwa ukubambela unyango oluvunyiweyo. Nangona kunjalo, izibonelelo ezichazwe apha ngasentla kunye nezifundo zenziwa ikakhulu kwizilwanyana nakwiiseli. Ubungqina obuzinzileyo beklinikhi busasilela.
Izifundo ezingakumbi ebantwini ziyafuneka ukumisela iziphumo ze-PEA kwimpilo yamathumbu, intliziyo, kunye nokukhululwa kwe-histamine.
I-Palmitoylethanolamide (PEA) ipowder yokuthengisa kunye nalapho ungathenga khona iPalmitoylethanolamide (PEA) ipowder ngobuninzi
SiyiPalmitoylethanolamide (PEA) umthengisi wepowder iminyaka emininzi, sinikezela iimveliso ngexabiso lokukhuphisana, kwaye imveliso yethu ikwinqanaba eliphezulu kwaye iyavavanywa ngokungqongqo, ezimeleyo ukuze kuqinisekiswe ukuba ikhuselekile emhlabeni jikelele.
UHansen HS. I-Palmitoylethanolamide kunye nezinye i-anandamide congeners. Indima ecetywayo kwingqondo yesifo. I-Neurol. I-2010; 224 (1): 48-55
Petrosino S, Iuvone T, Di Marzo V. N-Palmitoyl-ethanolamine: i-biochemistry kunye namathuba amatsha onyango. I-Biochimie. I-2010; i-92 (6): 724-7
UCerrato S, uBrazilis P, della Valle MF, uMiolo A, uPuigdemont A. Iziphumo ze-Palmitoylethanolamide kwi-histunologi ye-immunologically ye-histamine, i-PGD2 kunye ne-TNFα ekhutshwe kwiiseli zemisipha yesikhumba somhlaza. UVet Immunol Immunopathol. Ngo-2010; 133 (1): 9–15
IPyrroloquinoline Quinone disodium ityuwa (122628-50-6)